यहाँ एजुकेशन हबको कुरा हुन्छ, नीतिका कारण राष्ट्रिय तहको शिक्षा प्रदर्शन गर्न दिईदैनः लामिछाने | KTM Khabar
२०७३ चैत्र २९ गते ०९:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । यति बेला शैक्षिक संस्थाहरुको गतिविधिलाई लिएर धेरै नै बहस हुन थालेको छ । कहिले सरकारले ल्याएको नीतिका विषयमा हुन्छ भने कहिले सञ्चालित विद्यालयहरुको प्रबद्धनका निम्ति हुन्छ । यी विषयलाई केन्द्रित गरेर केटिएम खबरले समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई समेट्न विभिन्न बहसका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
यसै गरी समग्र शैक्षिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि बासबारी, पिपलबोटमा रहेको गुह्येश्वरी बोर्डिङ्ग हाई स्कुलका डाइरेक्टर डि.आर. लामिछानेसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । लामिछाने राष्ट्रिय गणित प्रशिक्षक तथा गणितिज्ञ पनि रहेका छन ।
प्रस्तुत छ उनै लामिछानेसंग गरिएको विशेष सम्वादको सम्पादित अंशः
सरको यत्ति बेलाको व्यस्तता कता तिर छ ?
अह ! यति बेलाको व्यस्तता एकेडेमी सेसन सुरु हुँदै छ । त्यही अन्तर्गन लाग्नु पर्छ नै । बुकहरुको काम भईरहेको हुन्छ, टे्रनिङ्गको काम भईरहेको हुन्छ, शिक्षा नीति अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको तयारीमा लागि रहेका छौँ हामी ।
यहाँ राष्ट्रिय गणित प्रशिक्ष तथा गणितिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अहिले यसको अवस्था कस्तो छ ?
गणित विषय अहिले प्यारोडिङ्ग तरिकाले गईरहेको छ । विशेषत नेपालमा व्यबहारिक शिक्षा लागु नभएको कारण यो एउटा हो । सरकारी तवरबाट नि यो यसरी जानु पर्छ भनेर आउँनु पर्ने हो तर आईरहेको छैन । आईरहेको भए अहिले हाम्रा विद्यार्थीले जुन खालको समस्या झेलिरहेका छन त्यो समस्याहरु झेल्नु पर्ने थिएन होला । अब व्यबहारिक शिक्षा लागु नहुँदा खेरी र गणितलाई व्यबहारिक रुपमा लैजान नसक्दा खेरी अहिले जति पनि मान्छेको माइण्डमा गणित प्रति मनोटोनस अहिले हामी व्यबहारिक रुपमा नै जानु पर्छ है भनेर लागि रहेका छौँ ।भएको छ । त्यसको रिजन त्यही हो र
हामीले जोड्नु, घटाउँनु, मल्टिप्याई मात्र गणित हैन । त्यसका जति पनि एब्लिकेसन छन तिनिहरु पनि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ है भन्ने खालको एउटा नीयम हो । त्यसलाई हामीले माइण्डमा राखेर अगाडी बढ्न खोजिरहेका छौँ र तपाईहरुले बच्चाहरुलाई गणितलाई फिल गराउँन सिकाउन सिकाउनुहोस । फिल गर्ने भनेको साच्चि नै गणित मलाई रमाईलो लाग्यो, पढ्न मन लाग्यो, गणितको कन्सेप्च मलाई एक दमै राम्रो लाग्यो । त्यो किसिमले बच्चा अगाडी जान्छ भने गणितका लागि बच्चाले फिल गरेको बुझिन्छ । हाम्रो अहिले कस्तो भईरहेको छ भने स्कुलमा कुनै ए, बि, सि भने सिकायो तर परिक्षामा पि, क्वि, आर आयो भने मैले पढेको छैन भन्ने खालको मेन्टिालिटी छ । त्यो प्रकारको हाम्रो अन्धविश्वास छ । त्यो हामीले हटाउँन खोजिरहेका छौँ । यसलाई हामीले राष्ट्रिय रुपमा लैजान खोजिरहेका छौँ । त्यसैले हामी टिचर टे्रनिङ्ग देखि लिएर सबैलाई अवेर गराउँन पनि गईरहेका छौँ ।
अहिले यहाँले दिनु भएको शिक्षालाई विकसित मुलुकसंग तुलना गर्ने हो भने अहिलेको शिक्षा कहाँ छ ?, के देख्नु हुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेको थिए । व्यबहारिक शिक्षा लागु हुन आवश्यक छ । व्यबहारिक शिक्षा जबसम्म लागु हुन सक्दैन तवसम्म हामी व्याक नै हुन सक्छौँ । हुन त केहि समय राम्रो होला ।
अहिले हाम्रो बच्चाहरु बाहिर गयो भने राम्रा गर्र्न सक्छन । लादिएर पढाईएको हुन्छ । नेपालमा बच्चा जन्माउँन पाएको छैन स्कुलमा पढाउँने प्रचलन छ । त्यस कारण बच्चाको माइण्डले फ्रिली काम गर्न सक्दैन । बच्चालाई तपाई प्रेसराईज गर्नु हुन्छ, टिचरलाई प्रेसरराईज गर्नुहुन्छ, प्यारेन्सले प्रेसराईज गर्नुहुन्छ । उसको खेल्ने टाईम, अरु टाईम पनि पेसरमा विताउँने भयो । मेरो विचारमा यो नीति छ नेपालमा पहिला त्यसलाई बन्द गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
बाह्य विकसिक देशको कुरा हेर्नु हुन्छ भने ५, ६ बर्ष नभइकन बच्चालाई स्कुल भर्ना गर्न पाइदैँन । जबसम्म बच्चाको मानसिक अवस्था विकास हुन सक्दैन तव स्कुलमा प्रेसर दिन पाईदैन । बच्चालाई फ्रि रुपमा पढ्न दिन सक्नु पर्छ, फ्रि रुपमा सिक्न दिनु पर्छ । त्यो खालको डेभलबमेन्ट भईरहेको छ ताकि उनीहरुले आफै बुझ्न सक्ने खालको हुन्छ । शिक्षा नीति अनुसार नेपालमा कस्तो छ भने जाने पनि नजाने पनि तैले पढ्नै पर्छ भन्ने खालको नराम्रो ट्रेन छ त्यो टे्रन हटाउँन आवश्यक छ किनकी एस.एल.सीको रिजल्ट हेरेर तैले यो पढ्न सक्छस्, त्यो पढ्न सक्दैनस् भन्ने खालको आइडेन्टिफाइ गर्न सकिदैन । बच्चाको मन भित्रबाट के आउँछ । त्यसलाई आइडिन्टिफाई गर्नु पर्छ । सबभन्दा उसको रियल ट्यालेन्ट के हो ? त्यो देखाउँन सक्नु पर्यो । त्यो ट्योलेन्ट अनुसार बच्चा अगाडी बढ्ने हो । भोली राम्रो बच्चाको अगाडी कमजोर बच्चा पर्यो र राम्रो बच्चाको सहयोगबाट उसले राम्रो नतिजा ल्यायो । प्यारेन्सले मेरो बच्चा त राम्रो पढेको छ । जान्ने छ भनेर सोच्नु हुन्छ । भोली उहाँले साइन्स नै पढ । तिमीले यो गर्नैै पर्छ । डाक्टर नै पढ्नु पर्छ, इन्जिनियर नै पढ्नु पर्छ । त्यो खालको टे्रन बसिरहेको छ । त्यसलाई हटाउन सक्नु पर्यो । प्यारेन्सले पनि के विचार गर्नु पर्यो भने मेरो बच्चाले ल्याएको नतिजाले यो लेभलमा पुग्न सक्छ ? कि सक्दैन ? भन्ने कुरा छुट्याउँन सक्नु पर्यो ताकि बच्चाले भोली गएर दुख नपाओस । यो कारणले नेपालको शिक्षा नीति व्यबहारिक शिक्षा अलि व्यबहारिक नभएको हो की जस्तो मलाई लाग्छ ।
अहिले हेर्ने हो भने नेपालको जनशक्ति रोजगारी अथवा पढ्ने बाहनामा बाहिरिरहेको देखिन्छ, यहाँहरुलाई एउटा आरोप छ पढ्ने बाहनामा बाहिरिने जनशक्ति जो यहाँहरुबाट उत्पादन भईरहेका छन, के नेपाल मै केहि गर्न सक्ने खालको शिक्षा दिन नसक्नु भएको हो र ?
मैले बारम्वार एउटा कुरालाई भनिरहेको छु । हामीले दिने शिक्षा सरकार अन्तर्गत नै रहन्छ । सरकारले जसरी प्रेसराईज गर्छ त्यही अनुसार नै अगाडी जानु पर्छ । हाम्रो आफ्नो तरिकाले जान पाईदैन । यदि हामी आफ्नै तरिकाले जाने हो भने हामी अर्कै तरिकाले जान सक्छौँ तर त्यो अन्तर्गत हामी जान सक्दैनौ । त्यो हाम्रो बाध्यता हो । अब हामीले दिने शिक्षा निम्न बर्गिय, उच्च बर्गिय सबैलाई एउटै हुन्छ । त्यसमा कसले कत्ति ट्याकल गर्न सक्छ । त्यसमा भर पर्छ । अमेरिकामा नै निम्न बर्गिय मान्छे, उच्च बर्गिय मान्छे उनीहरुले पढ्ने शिक्षा जुन नीतिमा गएको छ त्यो एउटै छ । त्यहाको शिक्षा व्यबहारिक विधिबाट भएको कारणले त्यहाका मान्छेहरु सफल भएका एउटा अध्यनले देखाएको छ । हाम्रो नेपालका किन सफल भएनन् त ? नेपालीले अमेरिका नै गएर पढ्नु पर्ने, नेपालका मान्छे अमेरिकाको युनिभर्सिटिमा टप गर्नु पर्ने । हाम्रो बच्चा त ट्यालेन्ट रहेछन त किन त्यहा नै जानु पर्यो त पढ्नलाई । यसमा हामीले दिएको शिक्षाको कारणले गर्दा भन्दा पनि देशमा सरकारले कुन खालको अवसर दिइरहेको छ त्यसमा भर पर्छ । हामीले दिने शिक्षा चाहे त्यो गरिब होस, चाहे धनि होस, एकदम मध्य बर्गिय होस सबैलाई एउटै हुन्छ । हामीले छुट्याएर दिने त्यो केही पनि छैन ।
डि.आर. लामिछानेसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको लिंकमा जानुहोसः